काठमाडौंमा मात्रै ४२२ कोरोना संक्रमित, कहाँ–कहाँ छन् ? - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंमा मात्रै ४२२ कोरोना संक्रमित, कहाँ–कहाँ छन् ?
काठमाडौंः काठमाडौंमा कोरोना संक्रमितको संख्या ४२२ पुगेको छ । उपत्यकामा सबैभन्दा बढी संक्रमित काठमाडौंमा छन् ।
काठमाडौंमा संक्रमितको संख्या ४२२ हुँदा ललितपुरमा ९६ जना र भक्तपुरमा ५४ मात्रै संक्रमित छन् ।
उपत्यकामा शुक्रबार ३८ संक्रमित थपिँदा काठमाडौंका मात्रै ३२ जना थिए । काठमाडौंमा कोरोना तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ । संक्रमित पनि बढिरहेका छन् ।
लकडाउन हटेसँगै मानिसको आवतजावत बढेपछि काठमाडौंमा कोभिड–१९ को जोखिम दैनिकरूपमा बढ्दै गएको छ । कोभिड–१९ बाट बच्नका लागि सुरक्षाका उपाय अपनाउनुपर्ने जरुरी देखिएको छ ।
कोरोना संक्रमित भेटिएका स्थानः काठमाडौंः कपुरधारा, कपन, चन्द्रागिरि, मैचीदेवी, मरुहिटी, कीर्तिपुर, पुरानो बानेश्वर, शंखमुल, चाबहिल, बालुवाटार, धुम्बाराही, महाराजगन्ज, तारकेश्वर, सीतापाइला, मनमैजु, नैकाप, गल्फुटार, कलंकी, धापासी, गोकर्ण, वसुन्धारा, बाफल, रानीवन, हाँडीगाउँ, कोटेश्वर, ट्याङ्लाफाँट, तीनकुने, खुसिबु, कागेश्वरी, टोखा, मूलपानी, काँडाघारी, साँखु, बौद्ध, बागबजार, वनस्थली, ताहाचल, सामाखुसी, टेकु, कुलेश्वर ।
बढी जोखिम क्षेत्रः बैंक तथा वित्तिय संस्था, बढी भिडभाड हुने सरकारी कार्यलय, सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक यातायात, होटल तथा रेष्टुरा आदि ।
ट्याग्स: काठमाडौं, कोरोना